Ukuze Uhehe Ukubhalisela I-imeyili, Abashicileli Kumele Bafakazele Ikhono Lokwenza Okuthandwa Nguwe Ngokubhalisa Kokuqukethwe | Martech Zone
Imboni yokushicilela ibonakala yenza konke okusemandleni akho emandleni ezincwadi zezindaba ze-imeyili ukuze ibandakanye izethameli futhi iqhube ibhizinisi. Okokuqala, Axios yamemezela emuva ngoSepthemba ukuthi izonweba ukusakazwa kwayo kwezindaba zasendaweni ngokwethulwa kwezincwadi zezindaba eziqondene nedolobha eziyisishiyagalombili. Manje, I-Atlantic isimemezele ukwethulwa kwama-imeyili amasha amahlanu, ngaphezu kwalokho okubhaliselwe kwama-imeyili okukhethekile okungaphezu kweshumi nambili osekusetshenziswa kakade.
Okukwaziyo yilaba nabanye abashicileli abaningi ukuthi izincwadi zezindaba ze-imeyili eziqondisiwe zinikeza ababhalisile lokho kanye abakufunayo: ukufakwa okufushane kwezihloko nezindaba abazikhathalelayo zilethwa ngokuqondile ebhokisini labo lokungenayo.
I-infodemic yomhlaba wonke yenze ukwethenjwa kwayo yonke imithombo yezindaba ukuthi irekhode ukwehla ngezinkundla zokuxhumana (35%) kanye nemithombo yezindaba ephethwe (41%) eyethenjwa kancane; abezindaba zendabuko (53%) babone ukwehla okukhulu kokuthenjwa ngamaphuzu ayisishiyagalombili emhlabeni jikelele.
As ukwethenjwa ezinkundleni zokuxhumana kwehle ngokushesha, abathengi bafuna enye indlela, futhi i-imeyili ilingana nebhili. Ngokuhlinzeka ngobudlelwano obuqondile, obungu-1:1 nababhalisile, abashicileli bangasebenzisa i-imeyili ukuze bakhiphe umuntu ophakathi nendawo futhi balethe okuqukethwe komuntu siqu okunembe kakhulu. Lokhu akufezi nje kuphela okulindelwe ngabathengi kokuzizwisa okujwayelekile okuzwakala sengathi kukhethelwe bona kuphela kodwa futhi kuvumela abashicileli ukuthi bafunde kabanzi mayelana nababhalisile babo nabangakuthandi ngokuziphatha ngokuchofoza, ukuze abashicileli bakwazi ukushuna ngokuqondile izincomo zokuqukethwe.
Nakuba ubuchwepheshe be-automation buye benza kwaba lula kubashicileli ukusebenzisa ubuhlakani bokwenziwa (AI) nokufunda komshini ukuze baqonde ukuziphatha kwababhalisi babo—lokho abachofoza kukho, nalokho abangakwenzi—futhi balethe okuqukethwe okuhlosiwe, lokho kuyingxenye yempi. Ukuthola abasebenzisi ukuthi babhalise kuseyisithiyo, ngisho nama-newsletter editions amahhala.
Phakathi kokukhathazeka ngobumfihlo, ukwabelana noma ukudayiswa kwedatha yabo, kanye nogaxekile, abanye abasebenzisi bayangabaza ngokuqondakalayo, futhi lokho kwenza kube nzima nakakhulu kubashicileli ukubaqinisekisa ukuthi kuyafaneleka ukubhalisa. Yebo, akusho ukuthi abashicileli kufanele banikeze iziqinisekiso mayelana nobumfihlo bedatha - lokho kuyizisekelo zetafula endaweni yanamuhla yedijithali, ingasaphathwa egunyazwe umthetho. Kodwa abasebenzisi basafuna ukwazi ukuthi bazothola okuqukethwe okubalulekile, okufanelekile.
Ukubhalisa ngokomongo sekuvele njengenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokuqinisekisa kubasebenzisi ukuthi bazothola umuzwa oqondene nawe, owenziwe ngokwezifiso abawulindele. Kodwa izincwadi eziningi zigeja leli thuba elibalulekile. Isivakashi esingaziwa singase sichofoze engxenyeni ethile yewebhusayithi—ezemidlalo, isibonelo, noma into ecace kakhulu njenge I-NY Mets or Chicago Blackhawks ikhasi lokukhava leqembu—futhi abashicileli bethula umtitilizo wokubhalisa we-imeyili ojwayelekile. Leli iphutha elikhulu, futhi kuyithuba elikhulu eligejiwe lokubonisa umsebenzisi ukuthi ungaletha kanjani okuqondene nawe, okuqukethwe okuqondiswe komongo abakufunayo.
Kunalokho, abamemezeli kufanele baqale beka isimo isicelo sokubhalisa ukuze babonise amandla abo okwenza kube ngokwakho-ukufakazela ababhalisile ukuthi bazothola ukuhlelwa kokuqukethwe abakulindele. Ngokusebenzisa ukuqondisa kokuqukethwe kwe-AI, ngisho nokushicilelwa okuncane kungaletha okunikezwayo kokubhalisa okungokomongo okubandakanya abasebenzisi futhi kubahehe ukuthi babhalise. Futhi akufanele kube yinkimbinkimbi. Isibonelo, uma umsebenzisi ongaziwa evakashela ikhasi lokunitha elisendaweni yokwenza, esikhundleni sokubhalisa okujwayelekile, esikhundleni salokho aphakamise ukuthi abhalise ukuze athole amaphethini okunitha angu-12 alandelayo. Noma umshicileli wezingadi anganikeza ama-imeyili akhe amancane omhleli wengadi yemifino kubasebenzisi abavakashela ikhasi lemibhede ephakanyisiwe, noma okuqukethwe kwengadi yemvelo kulabo abavakashela ikhasi lokwenza umquba.
Nakuba kulula kakhulu ukukhomba okuqukethwe kumsebenzisi owaziwayo uma esebhalise njengobhalisile futhi ungaqala ukulandelela ukuziphatha kwabo, kuthatha inhlawulo encane nje ukusebenzisa ulwazi lwedatha ukuze uqale leyo ngxoxo—ukwakha ingxoxo. umuzwa wokuxhumana nomsebenzisi.
Ngokubonisa ikhono lokuletha okuqukethwe komuntu siqu, okukhethiwe ngokukunikeza kanjalo, abashicileli banganqoba ukungabaza kwababhalisile ngokuqinisekisa abasebenzisi abasha ukuthi bazothola umuzwa oqondene nawe abasuke bekulindele. Lokho kwakha ukwethembana, ukuzethemba, nokwethembeka, okuvumela ngisho nabashicileli abancane ukuthi bakhulise ukubhaliswa kwabo kwezincwadi zezindaba ngokutshalwa kwezimali okuncane nomzamo, balethe i-ROI enamandla kanye nenani lebhizinisi eliphansi.
Tags: axiosi-Chicago blackhawksukubhalisa ngokomongoI-Edelman trust barometerukuzibandakanya kwe-imeyiliimeyili abashicileliukubhalisa nge-imeyiliokubhaliselwe kwe-imeyilii-jeengny ihlanganaukuzenzelaubumfihloabamemezelisignupssocial mediaukwethenjwa kwezokuxhumanai-Atlanticukwethemba